San Marcos de Leónသို့ဆုတောင်းခြင်း ? ယဉ်ပါးရန်၊ အလုပ်နှင့်ချစ်ရန်။
San Marcos de Leónထံဆုတောင်းပါ။ ဆုတောင်းချက်အားလုံးသည်အစွမ်းထက်သော်လည်း၊ လီယွန်၏အမှတ်အသားသူတော်စင်မှပဌနာ စိန့်မာကုသည်ယေရှုမြေကြီးပေါ်ရှိစဉ်ကယေရှုနှင့်နီးကပ်သောကြောင့်အချစ်၊ အလုပ်နှင့်ဖော်ပြရန်အတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။
San Marcos ၏ ospel ၀ ံဂေလိတရားသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ ထိုအချိန်ကမားကို့စ်ကဲ့သို့ပင်ကလေးတစ် ဦး ၏စိတ်ကိုဗားရှင်းရှိပြီး၎င်းသည် ၄ ​​င်းတို့အားဖြတ်သန်းသွားသူတိုင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိစေသောအမှန်တရားများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အက္ခရာများ။
မျှော်လင့်ထားသည့်အံ့ဖွယ်အမှုမည်မျှခက်ခဲပါစေယနေ့ San San Marcos သည်တန်ခိုးကြီးသောတောင်းဆိုမှုများအားလုံးကိုဘုရားသခင်အားတောင်းခံရန်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
1.1 လူတစ် ဦး ကိုယဉ်ပါးစေရန်လီယွန်၏စိန့်မာကုထံဆုတောင်းပါ
1.2 Leon မဖြစ်နိုင်သောမေတ္တာအတွက်ဆုတောင်းပါ
1.4 ဆုတောင်းခြင်းသည်လာခြင်းဖြစ်သည် အချစ်
ဆုတောင်းချက်များ သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏နက်နဲသောပင်လယ်ကနေပြုမိရန်ရှိသည် y ဖြစ်နိုင်သမျှသောရိုးသားမှုနှင့်အတူသတိရပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန်တောင်းဆိုနေကြောင်းသတိရပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ဘာကိုလိုအပ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာမေးမြန်းရန်လိုအပ်သည်။
Leon ၏ Saint Mark ထံဆုတောင်းခြင်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တယ်။
စိန့်မာရော့စ်ကသူ့သူငယ်ချင်းသေတာကိုမြင်ရတာဘာလဲ၊ သူညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ဟောပြောခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာသူသိတယ်၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၊
ဒါကြောင့်ပဲ ဘယ်အချိန်မှာသူကတုန့်ပြန်မှုပြုရန်ကြာမြင့်စွာမတောင်းဆိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ အခုငါတို့ကောင်းကင်မှာငါတို့ရဲ့မဟာမိတ်ပဲ။
တန်ခိုးတော်လည်းရှိ၏ infinito၎င်း၏မရေမတွက်နိုင်သောအံ့ဖွယ်အမှုများ။ ထောင်နှင့်ချီသောလူများသည်၎င်း၏တန်ခိုးကိုသက်သေပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ပဌနာ San Marcos de Leónထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။
လူတစ် ဦး ကိုယဉ်ပါးစေရန်လီယွန်၏စိန့်မာကုထံဆုတောင်းပါ
ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသယ်ဆောင်လာသူသည် San Marcos de Leónဖြစ်သည် el Mundo အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။
သင်၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်သန္နိjustice္ဌာန်တရားမျှတမှုရရှိအောင်ကျွန်ုပ်၏ရန်သူများသည်ကောင်းမွန်သော San Marcos မတိုင်မီရှုံးနိမ့်ပါစေ အင်အား ငါ့ကိုမှားယွင်းစေချင်တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးစိတ်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်တယ်။
အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြား ပြော၍၊ အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ခြင်းကိုနားထောင်တော်မူပါ။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုဆုတောင်းခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သူမျှတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးအခြားတစ်ခုထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မဟုတ်၊ အရေးကြီးသည်လည်းမဟုတ်ပါ။
El ယဉ်ဖို့မေးကြည့်ပါ လူတစ် ဦး သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ခြင်းသို့မဟုတ်သေခြင်းတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည် အလုပ်မှာ, အိမ်, ဆွေမျိုးနှင့်အတူ o မိတျဆှေ y Amore ။
နဂါးနှင့်ခြင်္သေ့တို့ကိုယဉ်ကျေးအောင်လုပ်သော၊ ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပူဇော်သကာတွေကိုသတိပြုပါ။
အိုး၊ အင်အားအရှိဆုံးသတ္တဝါကိုသုတ်သင်နိုင်သူ၊ ဆန်မာကို့စ်ဒီလီယွန်၊ ဒါဆိုငါ့ရဲ့ဆူဆူညံညံအော်ဟစ်သံကိုနားထောင်ဖို့လာ၊ လာ၊ လာကြ၊ ဘယ်သူမှသူ့ကိုမတားဆီးကြနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်သောခွန်အားနှင့်အတူတူချစ်ရန်ဖြစ်သည်။
စိန့်မာ့ခ်၊ သင်၏အိပ်မက်များနှင့်အိပ်မက်များအားဖြင့်ဘုရားသခင့်နာမတော်၌တည်ရှိပြီးကျွန်ုပ်မှတစ်ဆင့်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားဆီသို့ ဦး တည်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောအတွေးများအတွက် (ထိုသူ၏အမည်) ကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါ။ ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ဆုတောင်းခြင်း Saint Leon ၏ဆုတောင်းချက်သည်အမြဲလိုအပ်သည်။
ဖြစ်စေ အပြန်အလှန်အားဖြင့်မရ အဘယ်အရာကို တချို့အခက်အခဲကတဆင့်သွားနေပါတယ် စုံတွဲနှင့်အတူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ဆုတောင်း San Marcos de Leónသည်အစွမ်းထက်သည်
ဤသို့သောတောင်းဆိုမှုများတွင်လုံးဝရိုးသားမှုဖြင့်ပြောဆိုရမည်။ ငါတို့မြေကြီးပေါ်ရှိဤအခက်အခဲများအားလုံးကိုခံစားခဲ့ရသူတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောနေကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြည့်အဝနားလည်လိမ့်မည်။
သံသယဖြင့်ဆုတောင်းသောအခါဖြန့်ချိသောမကောင်းသောစွမ်းအင်များကဆုတောင်းခြင်းကိုမတိုးစေနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အညီမေးမြန်းရမည်၊ အရာခပ်သိမ်း၏ဖန်ဆင်းရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်အသင့်ရှိလိမ့်မည်၊ ငါတို့ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်။
သစ္စာရှိသူတစ် ဦး အနေနဲ့ဘုရားသခင့်အကြံအစည်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအကျိုးရှိရှိထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ကျမ်းချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ်ပိုခိုင်မာလာတယ်။
ထိုကြောင့်ချစ်သူ ev ၀ ံဂေလိဆရာ၊ ယနေ့သင်ကျွန်ုပ်သိထားသောမျက်နှာသာပေးခြင်းကိုတောင်းခံပါ။
သူနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ရောငါ့အတွက်ကောင်းကျိုးကိုသာရှာတယ်၊ သခင်နဲ့ပိုရင်းနှီးချင်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကြားရတော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ် ...
San Marcos de Leónကိုမေးကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ဘဝနှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုသည် ၎င်းသည်စစ်မှန်သောအရေးပါမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဤဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတန်ကြာစောင့်ဆိုင်းနေသောအလုပ်တစ်ခုသို့သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကိုစနစ်တကျစီးဆင်းခြင်းကိုတားဆီးနေသောမည်သည့်အဆင်မပြေမှုများကိုမဆိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ သင်၏အလုပ်လျှောက်လွှာကို San Marcos မှတောင်းဆိုနိုင်သည်၊ သူသည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင့်နာမတော်၌စိန့်ကီရီပန်၏စိတ်ဓာတ်နှင့်လမ်းစဉ်များ၏စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ ဒွန်ဂျွန်၏လမ်းခရီး၊ လမ်းမများ၊ လမ်းများနှင့်နေရာများ၊ စိန့်မာကု၏ ၀ ိညာဉ်တော်၏ ၀ ိညာဉ်တော်၊ ခြင်္သေ့။
ဒီဟာကိုငါလုပ်မယ် ကြွလာတော်မူသောခြင်္သေ့အမှတ်အသားကိုဆုတောင်းရန် ငါအာရုံငါးခုကိုကျွမ်းကျင်ကူညီဖို့သူတို့ကို conjure ။
အတွေး, အစမ်းနှင့်၏အလိုတော် (လူ၏အမည်) ငါမစားနိုင်၊ မအိပ်နိုင်ဘူး၊ မသောက်နိုင်၊
၂ ငါမင်းနဲ့တွေ့မယ်၊ ၃ ငါချည်ထားမယ်ငါသောက်တဲ့သွေး၊ မင်းမျက်လုံးတွေကန်းနေတဲ့မင်းရဲ့မျက်စိနဲ့ငါ့ရဲ့အလိုတော်ဟာမင်းအတွက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကို San Marcos de Leónထံဆုတောင်းပြီးအဆုံးသတ်လိုသည် လာစမ်းပါ.
ဒါဟာစိန့်မာကုဆုတောင်းလေ၏ စန်း cipriano.